Gịnị Mere The Channel Ọwara Ya mere mkpa ka Europe? | Save A Train
Home > Travel Europe > Gịnị Mere The Channel Ọwara Ya mere mkpa ka Europe?
Adịghị anya mgbe ndị Channel Ọwara dị ka ọtụtụ na-ezo aka dị ka Eurostar Ọwara mepere 1994, ọ kpọrọ otu n'ime ihe ịtụnanya asaa nke Modern World. Dị ka American Society of Civil Engineers, na aha e ọma kwesịrị. Ọ na-etinye Channel Ọwara n'etiti ụkpụrụ ụlọ ebube dị ka Alaeze Ukwu State Building na CN Tower.
The Eurostar Ọwara n'ezie a sịkwa na a oke feat nke ewu. Ma gịnị mere o ji dị mkpa maka Europe? Gịnị bụ ya mmetụta, na nke obodo nwere ike njem iru site na iji ya? Ka anyị nwere a nso lee anya na Channel Ọwara uru:
History Of The Eurostar Ọwara
N'agbanyeghị na ndị na-ewu nke Channel Ọwara malitere na 1988, nke ahụ apụtaghị na echiche bụ ọhụrụ. Ọbụna Napoleon toyed na echiche nke ejikọta England na France via a ọwara. tupu ya, French engineer Albert Mathieu-Favier mbụ chọrọ ndị dị otú ahụ a ọwara na 1802. Ya echiche gụnyere keakamere agwaetiti n'ụzọ, dị ka a ịnyịnya na-mgbanwe ebe. Otú ọ dị, ọtụtụ atụmatụ a gbahapụrụ ruo mgbe Agha Ụwa nke Abụọ.
na 1987, na Parliaments nke UK na France mesịrị kweta wuo Channel Ọwara. Ngo gụnyere ndị na-ewu atọ tunnels - abụọ maka okporo ígwè okporo ụzọ na otu dị ka a ọrụ ọwara. The mmepe were afọ isii, $7.2 ijeri, iri na otu agwụ igwe, na 13,000 ọrụ. Ya na-eri bụ Ẹkot taa $12 ijeri.
Channel Ọwara Facts
The Channel Ọwara bụ 31.35 kilomita ogologo, na mmiri n'okpuru osimiri ngalaba nke 23.5 kilomita. Ọ bụ ihe kasị ọtụtụ undersea ngalaba na ụwa na-agba 250 ft n'okpuru oké osimiri bed na ya kasị ala mgbe. The ọwara ejikọ Folkestone na England na Coquelles, Pas-de-Calais na France. Ọ na-agba n'okpuru English Channel na Strait nke Dover.
Gịnị na-eme ka ọwa Ọwara pụrụ iche bụ na ọ bụ naanị njikọ nke Great Britain na Chile Europe. na na elu-ọsọ ụgbọ oloko dị taa, ọ otu n'ime ndị kasị ụzọ njem site na UK na Chile Europe.
The Mmetụta emepe Channel Ọwara
The Eurostar Ọwara keere nnukwu ọrụ na-eme ka ụgbọ okporo ígwè njem inweta Ọzọkwa. Ha ya kpọrọ ihe karịsịa na UK, dị ka o mere ka o kwe omume na-aga Europe enweghị na-efe efe. Ọ na-enyere ndị njem belata-akwụ ụgwọ nke njem, nakwa dị ka ha carbon akara ukwu. Eurostar-eme atụmatụ na-ejegharị ejegharị si London na Paris ụgbọ okporo ígwè na-ewepụtarịrị 90% obere griin haus gas umu anwuru karịa ewere ụgbọelu.
The akụkụ kasị mma banyere Channel Ọwara bụ ya njikọ isi European ụgbọ okporo ígwè netwọk. iji ya, i nwere ike inwe ọtụtụ isi European obodo si UK. Ka anyị ghara ichefu na ọ bụ na-ekwe omume iru UK bụ isi na obodo ndị dị ka London enweghị efe efe. Ọ bụ ihe oké ọnụ, ngwa ngwa na ala ụzọ njem.
London to Lyon Highsped Train
Ọ bụrụ na ndị Channel Ọwara fascinates ị, iri a ride na site na ya! The njem nwere ike ịbụ na sinik, ma arịrịọ ya dinara ya mma. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịga ma ọ bụ site na a obodo na UK, akwụkwọ gị gbaa ụgbọ okporo ígwè taa!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fchannel-tunnel-europe%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#channeltunnel #traveleurope europetravel eurostar eurotrip London longtrainjourneys trainjourney Tranride ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ Train Travel ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ travelfrance